(ဂ)-နှစ်ပေါင်း(၉၀)ကျော်သက်တမ်းရှိသည့်ဧရာဝတီမြစ်ကူးတံတားဖြစ်သော စစ်ကိုင်းတံတား(အင်းဝ)အားဆေးအသစ်သုတ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း | Pyithu Hluttaw
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကို မီးရထားလမ်း၊ ကားလမ်းဆက်သွယ်ပေါင်းကူးပေးထားသည့် ဧရာဝတီမြစ်ကူးစစ်ကိုင်းတံတား(အင်းဝ)ကို ၁၉၂၇ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်အစိုးရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ဘုရင်ခံ Sir. Harcourt Butler ကအုတ်မြစ်ချခဲ့သည်ဟု သိရပါကြောင်း၊ ၁၉၃၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့တွင် ဘုရင်ခံ Sir. Hugh Stevenson က တံတားကြီးကို ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်ဟုလည်း သိရပါကြောင်း၊ အင်းဝတံတား(ခေါ်) စစ်ကိုင်းတံတားကြီးကျေးဇူးကြောင့် (၇၂၄)မိုင်ရှည်သော ရန်ကုန်-မြစ်ကြီးနား မီးရထားလမ်းသည် မန္တလေးမြို့မှတစ်ဆင့် အကြားအလပ်မရှိ တိုးလျှိုပေါက် ဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ဂျပန်အဝင်၊ အင်္ဂလိပ်အပြေး ၁၉၄၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၃ ရက်နေ့ညတွင် စစ်ပြေးအင်္ဂလိပ်က တံတားကြီးကို မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့သည့်အတွက် ခုံးအမှတ်(၇)နှင့် ခုံးအမှတ်(၈)တွင် ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း ကျိုးကျပျက်စီးခဲ့ရပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သော်လည်း တံတားကြီးကိုချက်ချင်းပြင်ဆင်နိုင်သေးခြင်းမရှိဘဲ စစ်ကိုင်းဆိပ်ကမ်းနှင့် မန္တလေးဘက် အမရပူရ စံရွှေးဆိပ်ကမ်းကို ကူးတို့များ၊ ဇက်များဖြင့် ကူးခဲ့ကြရသည်ဟုသိရပါကြောင်း၊ ၁၉၅၃ ခုနှစ် မေလမှသာ ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကိုယ်တိုင် စစ်ကိုင်း တံတားကြီးကို ကိုယ်တိုင်ကြပ်မတ်၍ မြန်မာအမျိုးသားအလုပ်သမားများဖြင့် ပြုပြင်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဒေါက်တာဘဦးက ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်ဟုလေ့လာသိရှိရပါကြောင်း၊ ယခုအခါ စစ်ကိုင်းတံတားကြီးသည် သက်တမ်းကြာခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မီးရထားဝန်ကြီးဌာနတို့၏ဂုဏ်ကျက်သရေဆောင် ရှေးဟောင်းတံတားကြီးအဖြစ် တည်ရှိနေပါကြောင်း၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများကလည်း စိတ်ဝင်စားကြပြီး အနီးအနားရှိ သမိုင်းဝင်သပြေတန်းခံတပ်နှင့် တံတားကြီးပေါ်ကိုလေ့လာခြင်း၊ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းများ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ရှိနေပါကြောင်း၊ တံတားကြီးသက်တမ်းမှာ နှစ်ပေါင်း ၉၀ ကျော်ကြာခဲ့ပြီး တန်ချိန်များသောယာဉ်များ ဖြတ်သန်းခွင့်မပြုတော့ဘဲမီးရထားနှင့်ယာဉ်ငယ်များသာ ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုထားသည့် အနေအထားသို့ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့ပါ၍ တည်ဆောက်ချိန် ခုနစ်နှစ်ကြာခဲ့ပြီး ပန္နက်ရိုက်ချိန်မှစတွက်လျှင် သက်တမ်း ၉၃ နှစ်၊ ဖွင့်လှစ်ချိန်မှစတွက်လျှင် သက်တမ်း ၈၆ နှစ်ရှိ အင်းဝတံတား သို့မဟုတ် စစ်ကိုင်းတံတားကြီးတွင် ဆေးများပျက်ပြယ်နေသည်ကို မည်သည့် အချိန်တွင် ပြန်လည်သုတ်ပေးမည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း မေးမြန်းပါသည်။
ဧရာဝတီမြစ်ကူးတံတားကြီး စစ်ကိုင်းတံတား(အင်းဝ)၏အရှည်သည် ၃၉၄၈ ပေရှိပြီး ရေလယ်တိုင် ၁၅ တိုင်၊ ပေ ၆၀ တံတားပေါင် ခြောက်ခုနှင့် မန္တလေးဘက်မှ ပေ ၃၅၀ အရှည် ခုံးကိုးခု၊ ပေ ၂၅၀ အရှည် ခုံးတစ်ခု စုစုပေါင်း ခုံး ၁၀ ခု ရှိပါကြောင်း၊
ယခင်ကရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထားက ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် တံတားကြီး၏ ပေ ၂၅၀အရှည်ရှိသည့်
ခုံးအမှတ် (၁၀)ကို ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေကျပ် ၄.၈၃၄ သန်း ကျခံ သုံးစွဲ၍ ဆေးသုတ်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ တစ်ဖန် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်တွင် မြန်မာ့မီးရထားက စုစုပေါင်း ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေကျပ် ၅၃.၃၉၃ သန်းကျခံသုံးစွဲ၍ တံတားကြီး၏ ခုံးအမှတ်(၅)၊ ခုံးအမှတ်(၆)၊ ခုံးအမှတ်(၈)နှင့် ခုံးအမှတ်(၉) စုစုပေါင်း ခုံးလေးခုနှင့် ကမ်းကပ်ခုံနှစ်ခု၊ ရေလယ်တိုင် ၁၅ တိုင်ကို ဆေးသုတ်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ မြန်မာ့မီးရထားအနေဖြင့် ရန်ပုံငွေခွဲဝေလျာထားမှုအခြေအနေအရ စစ်ကိုင်းတံတားကြီးကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ ဆေးသုတ်မွမ်းမံနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါကြောင်း၊ ယခုလက်ရှိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် တံတားကြီး၏ ခုံးအမှတ်(၃)နှင့် ခုံးအမှတ်(၇)တို့ကို ဆေးသုတ်မွမ်းမံခြင်း လုပ်ငန်းတို့အတွက် လုပ်ငန်းတန်ဖိုးကျပ် ၂၅.၆၂ သန်းဖြင့် တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့သော ဝင်းထီလာ ကုမ္ပဏီက မြန်မာ့မီးရထားနှင့် ၃၀-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် လုပ်ငန်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး ၂-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစပြီး ချေးချွတ်ခြင်း၊ ဆေးသုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ၂၇-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးနေပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်ရှိသည့် စစ်ကိုင်းတံတား၏ ခုံးအမှတ်(၁)၊ ခုံးအမှတ်(၂)၊ ခုံးအမှတ်(၄) စုစုပေါင်း ခုံးသုံးခုနှင့် ရေလယ်တိုင်များ၊ သံပေါင်များကို ဆေးသုတ်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်လျာထားချက်တွင်ပါဝင်ခြင်းမရှိသဖြင့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ရန် ကျန်လုပ်ငန်းများကို ထည့်သွင်းလျာထားပြီး ရန်ပုံငွေခွင့်ပြုချက်ရရှိပါကဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေး သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ရှင်းလင်းဖြေကြားပါသည်။